WordPress.com? Yingakho ngizoyisebenzisa kuqala. | Martech Zone
I-WordPress ingenye yezinto ezinkulu amapulatifomu wokubhuloga iyatholakala futhi iza ngezindlela ezimbili, WordPress.com futhi WordPress.org.
Ifomu lokuqala, WordPress.com, iyisevisi yokuhweba enikeza amathuluzi wokubloga amahhala futhi akhokhelwayo (kusetshenziswa i-WordPress kunjalo) kuwebhu. I-WordPress.com isebenzisa i- isoftware njengensizakalo model (aka SaS), ukugcina amathuluzi wesoftware wokubhala nokunakekela izinto ezinjengokuphepha nokulethwa kokuqukethwe (i-bandwidth, isitoreji, njll.).
Ifomu lesibili, WordPress.org, ngumphakathi osiza ukuthuthukisa nokugcina ifayili le- umthombo ovulekile inguqulo yesoftware yeWordPress. Ithuluzi lonke lokubhuloga le-WordPress lingalandwa futhi lifakwe kwikhompyutha, iseva, noma umhlinzeki wokusingathwa ozikhethele kona. Ukusetha kusezandleni zakho futhi unesibopho sokunikeza ukuphepha okudingekayo nokulethwa kokuqukethwe.
Kungani ungakhetha eyodwa kunenye?
Ake siqale ngokuthi kungani iWordPress.com kuqala. Khumbula, banikela ngesoftware elungele ukusebenza njengebhulogi. Ukusetha obhekene nakho, uma ufuna, kuklama ukubukeka kwebhulogi yakho. Izinto ezifana nezindikimba noma ukwakheka ziyatholakala ukuze uzihlele. Kukhona okuzenzakalelayo futhi i-WordPress.com inikeza iziphakamiso. I-WordPress.com iphinde inikeze isethi enhle yobukhulu be- amawijethi futhi ama-plugin, okungamathuluzi wokubloga amancane afaka izici nokusebenza kubhulogi yakho. Isibonelo, ufuna inkomba yokuthunyelwe kwebhulogi edlule? Kukhona ifayela le- Faka kungobo yomlando iwijethi. Ufuna ukukhombisa izithombe zakho zakamuva kusuka kuFlickr? Kukhona Iwijethi yeFlickr.
I-WordPress.com nayo iyibhizinisi lezentengiselwano, elihlinzeka ngezinto ezingeziwe ukusiza ukuthuthukisa ibhulogi yakho. Lokhu okungeziwe kunenani, yize kungabizi nhlobo, futhi kusiza ukwakha ibhulogi yakho nangaphezulu. Isibonelo, izingqikithi ezizenzakalelayo zimnandi ngokwanele ukuqala ukubhuloga. Kepha uma ufuna ukubukwa okuthile noma ukwakheka ukuze kulingane kahle isitayela sakho, ungahle uthande ukuthenga i- isihloko se-premium.
Uma uqala ibhulogi ku-WordPress.com, kunguqulo yamahhala, uzothola igama lesizinda elibukeka kanjena: your-blog-name.wordpress.com. Ngokwesibonelo: umlimi.wordpress.com. Ukuze ube negama lesizinda elithi non-wordpress.com, uzodinga ukuthuthukisa insiza yakho ukuze usebenzise i- igama lesizinda langokwezifiso.
I-WordPress.com, futhi, ibhizinisi lokuhweba ngakho-ke, ngezikhathi ezithile, bangakhangisa izikhangiso kumasayithi wama-blog wamahhala. Ungagwema ukuthi lezo zikhangiso zivele kubhulogi yakho ngokuthenga i- Inqwaba yenani. I-Value Bundle iphinde inikeze isikhala esingeziwe (kubalulekile uma unezithombe eziningi), ikuvumela ukuba ube netimu yangokwezifiso, negama lesizinda langokwezifiso.
Kunemikhawulo ethile ekusetshenzisweni kwe-WordPress.com ongadinga ukuyicubungula. Sebenzisa noma iyiphi i-plugin oyifunayo akunakwenzeka uma i-WordPress.com inganikezi isikhulu sayo service. Isibonelo, uyafuna ukusebenzisa i- I-SexyBookmark Xhuma? I-WordPress.com ayinayo i-SexyBookmark njengengxenye yesevisi yabo eyinhloko ye-plugin. Ufuna ukusebenzisa I-NextGen i-plugin yokuphathwa kwemidiya? Nakho lokhu akuyona ingxenye ye-core WordPress.com plugin suite.
Lokhu akusho ukuthi iWordPress.com ayinazo izixhumanisi zokwabelana (banazo, bheka Ukwabelana) noma ukuphathwa kwemidiya (nalokhu banakho, niyabo Umtapo wezincwadi wezindaba). Isizathu sokuthi i-WordPress ivimbele ukusetshenziswa kwama-plugins kungenxa yokuthi ama-plugins yi-software okumele igcinwe ngokuhamba kwesikhathi ukuqinisekisa ukusebenza kweWordPress.com. Ukuvumela noma iyiphi i-plugin kungadala ukuthi insiza yeWordPress.com iyentengantenge futhi, lapho kusenzakala, kubangele izingqinamba ngebhulogi yakho.
Kungani usebenzisa iWordPress.com? Isizathu esikhulu kunazo zonke ukuthi izindleko, kungaba mahhala noma izigaxa ze-premium, ziphansi kunokuthi ubambe futhi silondoloze isayithi lakho le-WordPress.org. Cabanga ngalokho okunikezwa yiWordPress.com, enguqulweni yabo yamahhala: ipulatifomu yokubhuloga ekulungele ukuya kwiseva yewebhu abayiphathayo nabayigcinayo. Futhi ngezixha ze-premium, kubiza kusuka ku- $ 99 ku- $ 299 (UPDATE 2013 03 13: $ 99 kuye ku- $ 299 ngonyaka), bathatha umsebenzi, isikhathi, Ukusekela ngokulondoloza, nomzamo wokuqinisekisa ukuthi ibhulogi yakho iyatholakala futhi yazisa izithameli zakho. Ngemuva kwalokho ungavele ugxile kubhulogi, uthole leyo mibono ethokozisayo bese wabelana ngayo nabanye.
Kuthiwani ngeWordPress.org, i-WordPress eyenzelwe wena? Ngayo yonke le micabango engenhla ku-WordPress.com, kungani ungafuna ukulanda nokusetha i-WordPress engxenyeni yakho ye-Intanethi?
Isizathu esiyinhloko esenza abantu abaningi benze lokhu kungenxa yokuthi ukulawula okuningi. Ama-plugins namawijethi owakhethayo angasetshenziswa. Isibonelo, uma ungumthwebuli wezithombe ofuna ukudala imidwebo yezithombe zomsebenzi wakho i-plugin ye-NextGen media iyilokho okudingayo. Noma, uma ufuna ukwenza ngokwezifiso ukubukeka ngezindikimba eziyisisekelo ezifana Umqondo or Genesise, khona-ke iWordPress.org ingeyakho.
Uma ufuna ukwenza izikhangiso zakho, i-WordPress eyenzelwe wena yilokho okudingayo. I-WordPress.com ayivumeli umuntu ukuthi enze izikhangiso ezihambisanayo noma eminye imikhankaso efanayo (bona inothi ku- Ukukhangisa).
I-WordPress ebanjelwe yona inikela ngokuguquguquka okungaphezulu uma kukhulunywa ngokusetha nokucushwa. Kodwa-ke, ngalokho kuguquguquka kuza nomthwalo wemfanelo. Unesibopho sokusingatha (ngokwesibonelo kwinsizakalo efana ne- BlueHost), ukugcinwa kwesoftware yebhulogi njengoba kudingeka (imbewu ithunyelwe ukuthuthukiswa), Futhi Ukusekela ngokulondoloza.
Ukukhetha ini? Uma uyibhizinisi ngisaqala nje ukubhuloga lapho-ke ngincoma i-WordPress.com futhi ngigxile ekuthuthukiseni ibhulogi yakho njengomkhuba. Isizathu salokhu inani lesikhathi sakho: uyafuna futz (fancy term for waste time) nxazonke? Inhloso yakho ukuxhumana nezithameli, amakhasimende akho, njalo. Izindleko zokuqalisa, noma ngabe iphakethe le-premium, liphansi uma kuqhathaniswa nesikhathi sakho.
Futhi uma ungelona ibhizinisi futhi ufuna nje ukubhuloga, imodeli yamahhala yeWordPress.com kulula ukuqala ngayo. Futhi, awunayo i-futz, ekuvumela ukuthi ugxile kokuqukethwe kanye nokwenza kwe-blogging.
Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha, noma kunjalo, zokubhuloga (masonto onke, akunjalo?) Ungahle uthande ukubheka kabusha ukusebenzisa kwakho i-WordPress.com. Cabanga ngebhizinisi noma ngebhulogi ngezidingo ezibucayi ezingakatholakali. Ngalezo zidingo ezingafinyelelwanga engqondweni ungathatha isinqumo ngokuthuthela kubhulogi elizimele noma cha. Futhi (nansi isici esihle impela) ukufuduka kusuka ku-WordPress.com kuya ku-WordPress.org kuhle phambili ngqo. Izodinga ukuhlelwa nokuhlolwa kepha inqubo iyaziwa.
Tags: phethweWordPressi-wordpress hostingwordpress.com
Mar 13, 2013 ku-7: 11 PM
Kumele, 100% angivumelani nawe kulokhu, John! 🙂 Uveze ukuthi ukulawula bekuyinto engeyinhle yokubamba ku-WordPress.com - akukhona nje ukulawula amawijethi nezindikimba nokukhangisa. Kuphinde kube ukulawula ukwenziwa okulondoloziwe nokulondolozwa kwesikhashana. Isayithi elizenzele lona ngo- WPEngine inengqalasizinda eqinile kakhulu, ukuphathwa kwesizinda, ukuqapha ukuphepha, izipele, indawo enezigaba, ikhonsoli yokuqondisa kabusha yokuqondisa, inethiwekhi yokulethwa kokuqukethwe, uhlelo lwesilondolozi sobuciko, ukufinyelela kuzikhombisi zezimpande, izilawuli zomsebenzisi… konke okungaphansi kokungaphansi kwama- $ 99 ngenyanga. Musa ukudiliza ukufakwa kwakho kweWordPress ngokukubeka ku-WordPress.com - kumosha isikhathi.
Mar 15, 2013 ku-1: 16 AM
Kumele ngivumelane noDoug nakulena. Ekugcineni, mhlawumbe akuyona inkinga enkulu kangako ukuhamba nomunye uma konke kufika kukho, kepha uthola ukulawula okuningi kakhulu lapho uhamba umzila ozibambile. Manje, uma othile efuna ukuhlola i-WordPress futhi “akhahlele amathayi” ngomqondo ongokomfanekiso, bese usetha isiza sakho kusisombululo se-.com uma ungafuni ukusebenzisa imali. Kungcono kakhulu kune-Blogger, kepha uma ngabe ubucayi kakhulu ngalokho okwenzayo online. Iya nesisombululo se- .com, nanoma ngubani odinga usizo oluthile ukwenza izinto zisethwe futhi zilungiselelwe bona, ngazise nje.
Mar 15, 2013 ku-1: 18 AM
Futhi, I-WP Engine (i-aff link), manje inenketho ye- $ 29 / mnth yesayithi elilodwa. Insizakalo enhle, ukwesekwa okukhulu.
UJun 25, 2013 ngo-9: 59 AM
lesi yindatshana enhle!
ngiyabonga ngolwazi! izokwabelana…